Yangon မှာ LCD ပြင်တာ ဘယ်ဆိုင် ကောင်းလဲဗျ — MYSTERY ZILLION
Yangon မှာ LCD ပြင်တာ ဘယ်ဆိုင် ကောင်းလဲဗျ
Yangon မှာ LCD ပြင်တာ ဘယ်ဆိုင် ကောင်းလဲဗျ။ ကျွန်တော့ Notebook LCD လေးပျက်သွားလို့။ အဲဒါ ပြင်ချင် လို့ပါ။ <br><br>
LCD တော်တော်များများက ပြင်မရပါ။ LCD လဲလိုက်တာပဲ ရလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကိုစေတန်။ ကျွန်တော့ laptop lcd ကပျက်တယ်လို့ တော့ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါ တစ်လေ ပြန်ရတယ်။ desktop lcd နဲ့ extend တွဲ သုံးရင် ပြန်ရသွားတက်တယ်။ <br>ခုနောက် ပိုင်းတော့ လုံးဝကို မရတော့ တာ။ အထဲ မှာ ကြိုး လွှတ်နေတာ လားမသိဘူး။
May 2011 edited May 2011 Registered Users
ဘိုကလေးစျေးလမ်း ထဲက ZPT ကတော့ Laptop တော်တော်များများ ပြင်တာ ကောင်း တယ်။ ကို ဉာဏ်လင်းမြတ် Laptop က LCD ပျက်တာ မသေချာသေးဘူး ထင် တယ်။ LCD ပဲ ပျက်တာ ဆိုရင်တော့ တခြား နေရာတွေက ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
[email protected] computer ..
Sake kan tar street . between mahar bandula road andanae yahter road ..
I don't know how to type MM3 ..
ICE မှာကြိုးစားကြည့်ပါ ... ကျွန်တော်မျက်မြင် .. MAC book တလုံးနဲ့ ACER တလုံး LCD ကွဲသွားတာပြန်လုပ်လို့ရပါတယ် . . အဲဒီ၂လုံးစလုံးက သူ့ဆိုင်ကမဟုတ်ပါဘူး .. ၁၀၀၀၀၀ ဝန်းကျင်ကုန်ကျပါမယ် .. MAC book ဆိုရင် ၁-၂ လကြာပြီး ACER ဆိုရင် ၃-၄ရက်ပဲကြာပါတယ် ..
for Note Book @ 2nd Street Shop Name is Yametac
this shop i know is since 1998 he is the best in yangon at that time
for Minitor @ 39th Street Middle Shop Name is Monitor City
ph 389326 is good for you